Velona mitsipozipozy… | NewsMada
Par Taratra sur 10/02/2018
Hivalona eo tokoa ny resabe mikasika ny fivoahan’ny praiminisitra hoe nanao fizaham-pahasalamana « mahazatra » tany ivelany ka nanendrena ny minisitra eo ambany Fiadidian’ny Repoblika misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana hisolo vonjimaika azy ? Efa tafaverina an-tanindrazana afakomaly tolakandro, moa izy ary ity praiminisitra mpisolo toerana ity mihitsy, niaraka tamina minisitra vitsivitsy no nitsena azy teny Ivato. Toy ny milaza hoe : ianareo foana no te hanisy sira eo, fa jereo izahay mifanaraka tsara, tsy misy disadisa. Raha izay tokoa moa ka maninona. Arahaba soa, arahaba tsara.
Fa tena izay tokoa ve ? Tsy misy fisehoan-javatra tongatonga ho azy izany mantsy. “Ny vy, tsy mikitrana irery”, hoy ny fitenenana, ary ny hitsikitsika tsy mandihy foana, fa ao raha. Iza ary avy aiza ny nivoahan’ireny hoe fanilihana, fampiatoana ny praiminisitra amin’ny asany ireny ? Iza no mahazo tombontsoa amin’izany ? Mazava loatra, tsy ho olona ety ivelan’ny governemanta mihitsy fa tsy maintsy ho ao anatiny sy avy eny an-dapa eny ihany.
Na izany na tsy izany, hitondra inona eo amin’ny fiainam-bahoaka andavanandro moa izany ? Tsy hay intsony na sarimihetsika na inona. “Tsy miady, tsy miady, ny kibay anefa, an-kelika ihany”. Efa mahazatra ity fitondrana ity rahateo izay.
Ny praiminisitra no hoe nanao fizaham-pahasalamana “mahazatra”. Fa raha ny marina, ity fitondrana ity amin’ny ankapobeny mihitsy no marary, reraka, malemy… Zara raha mahavita ny asa andrasan’ny vahoaka aminy. Mazava loatra ny fiantraikan’izany eo amin’ny firenena. Marary, mangirifiry amin’ny fahasahiranana, fahantrana lalina ny vahoaka. Mikiakiaka, mikaikaika noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. Velona ihany fa mitsipozipozy.